[ September 18, 2021 ] अनिताले तिमिले चोखो माया दिएर पो बाच्न पाए भनेपछि…. (हे’र्नुस् भिडियो ) समाचार
[ September 17, 2021 ] बुढेसकालमा लठ्ठि हैन तिम्रो हात समाउँछु बिनोदले भनेपछि अनिता खुसि भइन् (भिडियो सहित) समाचार
[ September 16, 2021 ] भगवान् जस्ता श्रिमानको काखमा यसरी रमाउदै अनिता… समाचार
[ September 15, 2021 ] टिकटक बनाउन खोज्दा सेतीमा यसरी खसिन् दुलहन फर्काउन माइत आएकी पवित्रा (भिडियो सहित) समाचार
[ September 14, 2021 ] एउटा साँढेको कारणले यी महिलाले गरिनन् बिहे, परिवार`सँग छुट्टिएर साँढेसँग एक्लै बस्छिन् समाचार
Homeसमाचारफेरि होला लकडाउन ?
March 24, 2021 admin समाचार 2987
कोरोना भाइरस संक्रमण रो’कथाम तथा निय’न्त्रण गर्न लकडाउन गरिएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले ठीक एक वर्षअघि चैत ११ देखि एक साताका लागि लक:डाउन गरेको थियो। तर, त्यसको अवधि थपिँदै लगिएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना संक्रम’ण बढ्न थाले’सँगै नेपालमा त्रास बढेको छ। धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘नेपालमा के होला ?’
शुक्रराज ट्रपि’कल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी गत वर्षझैं लकडाउन घोष’णा गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘कार्यालय, विद्यालय, कलकारखाना र सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिफ्ट’अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ’, निर्देशक डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर जन’स्वास्थ्य मापदण्ड पाल’ना गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार नयाँ संक्रमित मात्र होइन, खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि पुनः संक्रमण देखिएको छ। ‘खोप लगाउँदैमा शतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन। संक्र’मण हुने र अरूलाई सार्ने सम्भावना कायमै हुन्छ’, उनी भन्छन्।
काठमाडौं : को’रोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले ठीक एक वर्षअघि चैत ११ देखि एक साताका लागि लक’डाउन गरेको थियो। तर, त्यसको अवधि थपिँदै ल’गिएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै ने’पालमा त्रास बढेको छ। धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘नेपालमा के होला ?’
शुक्रराज ट्रपि’कल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी गत वर्षझैं लकडाउन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘कार्यालय, विद्यालय, कलका’रखाना र सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिफ्टअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ’, निर्देशक डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘सबै नाग’रिकले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार नयाँ संक्रमित मात्र होइन, खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि पुनः संक्रमण दे’खिएको छ। ‘खोप लगाउँदैमा शतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन। सं’क्रमण हुने र अरूलाई सार्ने सम्भावना कायमै हुन्छ’, उनी भन्छन्।
गत वर्ष हवाई मार्ग र स्थल मार्ग भएर नेपाल आउ’नेलाई गरिएको ‘फरक मा’पदण्ड’ले लकडाउनको अवस्थामा पुर्‍याएको विज्ञको भनाइ छ। तेस्रो र दोस्रो लहरको मार खेपि’रहेका मुलुकबाट स्वदेश छिर्नेलाई गत वर्षको गल्ती नदोहोर्‍याई समान मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उनी’हरूको सुझाव छ।
‘गत वर्ष विकसित मुलु’कबाट स्वदेश फर्कनेको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरियो। भारतबाट घर फर्कनेलाई पीसीआर रिपो’र्टबिना हुरुरु छिर्न दिइयो। घर पठाइयो’, जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘यही दोहोरो मापदण्डले कोरोना संक्र’मण बढ्यो। लकडाउन घोषणाको अवस्था आयो।’
कोरोना संक्र’मणको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जोखिम उस्तै छ। भारतमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी संक्रमित हुन पुगेका छन्। सवा लाखमा झरेको सक्रिय संक्र’मितको संख्या झन्डै चार लाख पुगेको छ। नेपाल–भारत नाकाबाट निर्बाध आवतजावत भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणलाई देखा’एर लकडाउन घोष’णा गर्न नहुने डा. मरासिनी बताउँछन्। विगतको गल्ती सच्याएर अघि बढ्नु’पर्ने उनको सुझाव छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा’लयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम गत वर्षझैं मुलुकभर पुनः लकडाउन घोषणाको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘एन्टिजेन परीक्षण र घरमा बस्न नसक्ने’लाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘तत्कालै लकडाउनको योजना छैन। जनस्वा’स्थ्यका मापदण्ड पालनालाई जोड दिनुपर्छ। संक्रमण बढेकाले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। मास्क ल’गाउनुपर्छ। साबुनपानीले राम्रोसँग हात धुनु वा स्यानि’टाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ।’ नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने हुँदा देशभर भीडभाड हुने कार्य नगर्न÷नगराउन अ’नुरोध गरिएको डा. गौतम बताउँछन्। – अननपूर्णपोस्ट् बाट
चिया वाली सृष्टि तामाङलाई भाइरल बनाउने यि हुन् गजेन्द्रराज, वास्तविक कथा अर्कै रहेछ (भिडियो हे’र्नुहोस)
नेपालसंग जोडिएका भारतीय सिमाना खुला, दुई दिनभित्रै पहिले जस्तै ओ’होरदोहोर गर्न मिल्ने
March 18, 2021 admin समाचार 2808
दक्षिणका सीमा ना’काबाट दुई दिनभित्रै पूर्ववत् रुपमा यात्रुबाहक सवारी साधन आ’उजाउ गर्न पाउने भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वीरगञ्जबाट आएको व्यव’सायी र पत्रकार टोलीसँग सो जा’नकारी दिएका हुन् । ‘सीमा खो’ल्नुपर्छ भन्नेमा हामी पहिलेदेखि
फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान ख’स्कियो
April 7, 2021 admin समाचार 3308
फोर्ब्सले सार्व:जनिक गरेको धानाढ्यहरूको ४५औं वार्षि’क सूची अनुसार चौधरी २१४१ स्थानमा छन्। अघिल्लो वर्ष उनी १५१३ स्थानमा थिए । दुई वर्ष लगातार उनको वार्षिक सम्प_त्ति १.४ अर्ब अमेरिकी डलर छ। सन् २०१९ मा उनको सम्पत्ति
ह्वात्तै सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?
June 22, 2021 admin समाचार 1983
स्थानीय बजा’रमा सुनको मूल्य प्रतितोला ६०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासं’घका अनुसार आज सुन प्रतितोला ६०० रुपैयाँले बढ्दै ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको हो। गत आइतबार एकैदिन ८०० रुपै’याँले घटेर सुनको मूल्य गत
अनिताले तिमिले चोखो माया दिएर पो बाच्न पाए भनेपछि…. (हे’र्नुस् भिडियो )
बुढेसकालमा लठ्ठि हैन तिम्रो हात समाउँछु बिनोदले भनेपछि अनिता खुसि भइन् (भिडियो सहित)
भगवान् जस्ता श्रिमानको काखमा यसरी रमाउदै अनिता…
टिकटक बनाउन खोज्दा सेतीमा यसरी खसिन् दुलहन फर्काउन माइत आएकी पवित्रा (भिडियो सहित)
एउटा साँढेको कारणले यी महिलाले गरिनन् बिहे, परिवार`सँग छुट्टिएर साँढेसँग एक्लै बस्छिन्
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215229)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (206984)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (206641)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (205562)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204354)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (203590)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (201838)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (201680)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (193994)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (170773)